Fampihorohoroana - Wikipedia
Ny fampihorohoroana dia ny fampiasana ny tahotra sy ny herisetra ao mba hampitahorana fiaraha-monina na fitondram-panjakana. Maro isan-karazany ny fikambanana ara-politika na ara-tsosialy mety mampiasa ny fampihorohoroana mba hanatrarana ny tanjona. Ny olona izay manao asa fampihorohoroana dia antsoina hoe mpampihorohoro.
Sarotra ny manazava ny fampihorohoroana. Ny famaritana hita matetika dia ny fampihorohoroana manondro herisetra izay natao mba hamorona ny tahotra (horohoro); dia atao ho ana tanjona ara-pivavahana, ara-politika, na ideolojika; ary mikendry sivily. Ny fampiasana ny tetika toy izany koa amin'ny alalan'ny andian-jiolahy mpanao heloka bevava dia matetika tsy antsoina hoe fampihorohoroana, fa azo antsoina hoe asa fampihorohoroana raha atao noho ny antony ara-politika.
Misy famaritanana 100 mahery ny "fampihorohoroana". Amin'ny tranga sasany, ny vondrona ihany dia azo lazaina fa "mpiady fahafahana" araka ny mpanohana sy heverina ho mpampihorohoro araka ny mpanohitra. Ny foto-kevitra fampihorohoroana dia mety ho resabe. Ilay teny dia matetika milaza ny mpanohitra ara-politika manakiana. Miampy an'izany koa ireo fanjakana izay manao fampihorohoroam-panjakana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fampihorohoroana&oldid=694082"
Dernière modification le 20 Desambra 2014, à 18:33
Voaova farany tamin'ny 20 Desambra 2014 amin'ny 18:33 ity pejy ity.